Morgan Freeman – Cast – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
Bruce Almighty (2003) Unicode God ကို အပွဈတငျဖူးတယျဆိုရငျတော့ ကွညျ့ဖွဈအောငျ ကွညျ့လိုကျပါ။ High-Concept Comedy ကားလေးတဈကားဖွဈတဲ့ Bruce Almightyနဲ့ မိတျဆကျ ပေးခငျြပါတယျ။ ရယျမောအပနျး ဖွနေိုငျသလို ပညာပေးလေးလညျး ဖွဈတဲ့ ကားကောငျးတဈကားပါ။ ဒီကားမှာ Jim Carrey (The Mask, Ace Ventura), Morgan Freeman (Shawshank Redemption), Jennifer Aniston (We're the Miller) တို့အဓိက ပါဝငျသရုပျဆောငျထားပါတယျ။ ဇာတျလမျးကတော့ Bruce Nolan (Jim Carrey) နဲ့ Grace Connelly (Jennifer) တို့က အတူနေ ခဈြသူတှဖွေဈပွီး Bruce က Reporter တဈယောကျဖွဈပွီး၊ သတငျးကွငွောသူအဖွဈ ရာထူးတိုးဖို့ ကွိုးစား မြှျောလငျ့နသေူဖွဈပါတယျ။ သူနဲ့ အပွိုငျ Evan (Steve Carell) က သတငျးကွငွော ...
IMDB: 6.7/10 352,448 votes
The Shawshank Redemption (1994) Unicode မိတျဆှတေို့ Google မှာ IMDb rating အမွငျ့ဆုံးကားမြား လို့ ရိုကျရှာကွညျ့ခငျြပါသလား? Rotten tomatoes ရဲ့ အကောငျးဆုံးကားမြားလို့ ရိုကျရှာကွညျ့ခငျြပါသလား? ရုပျရှငျသမိုငျးတလြှောကျအကောငျးဆုံးကားမြား…..မသခေငျကွညျ့သငျ့သော ကားမြား….ဘာညာသာရကာ အစုံရိုကျပွီး ရှာကွညျ့လိုကျပါ။ ဒီဇာတျကားကတော့ ထိပျပိုငျးတဈနရောမှာ အမွဲပါနပေါလိမျ့မယျ။ ဇာတျလမျး အကဉျြးလေးကတော့ ရိုးရှငျးပါတယျ။ လူသတျမှုနဲ့ ထောငျဒဏျ တဈသကျ ၂ ခါ ကခြံရပွီး ရှောရှနျ့ချ ထောငျထဲကို ရောကျလာတဲ့ ဘဏျစီးပှားရေးသမား အနျဒီ ဒူဖရငျး(Tim Robbins) နဲ့ တကြှနျးသမားဟောငျးကွီး ရကျဒျ(Morgan Freeman) တို့ ရဲ့ ထောငျထဲက အခကျအခဲတှနေဲ့ မိတျဆှဘေဝ၊ အနျဒီရဲ့ ငရဲလို မြှျောလငျ့ခကျြမရှိတဲ့ နရောမှာ ကိုယျ့ကိုကိုယျ ဘယျလိုတညျဆောကျပွီး နထေိုငျသှားလဲ၊ လှတျမွောကျမှုကို ဘယျလိုရှာဖှသှေားလဲ ဆိုတဲ့အကွောငျးလေးပါပဲ။ ရုပျရှငျလေးက ရိုးရှငျးပမေယျ့….ဒါရိုကျတာတိုငျး အိပျမကျမိမယျ့ အောငျမွငျမှုတှေ ရရှိသှားခဲ့ပါတယျ။ အျောစကာ လြာထားမှု ...
Along CameaSpider (2001) လွှတ်တော်အမတ်ရဲ့သမီးလေး Private School မှာ ပြန်ပေးဆွဲခံလို့ရတဲ့ အမှု့ကို Morgan Freeman တစ်ယောက်စုံစမ်းရင်း ဘယ်လိုအရူပ်ထုပ်တွေ ဖြေရှင်းရမလဲ ? တကယ်တရားခံကကော ဘယ်သူလဲ မထင်မှတ်ထားတာတွေနဲ့ စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းပါ။ imdb 6.4 အထိရထားလို့ မကြည့်ရသေးရင် ကြည့်ကြည့်ပါအုံး
IMDB: 6.4/10 69,296 votes
RED (2010) ဒီတစ်ခါတော့ အက်ရှင်ကြိုက်တဲ့ပရိသတ်တွေအတွက် တကယ့်ကိုရင်ထဲထိစေမယ့် Red ဆိုတဲ့ အက်ရှင်ရိုမက်တစ်ဇာတ်ကြမ်းကားလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ Red ဆိုတာကတော့ Retire: Extremely Dangerous ရဲ့အတိုကောက်ပါ အငြိမ်းစားယူထားပြီးဖြစ်တဲ့ စီအိုင်အေက အေးဂျင့်တွေရဲ့ အကြောင်းကိုရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရိုက်ကူးထားတာပါ အေးဂျင့်ဟောင်းဖရန့်ခ်မို့စ်ဟာ သာမန်မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဆာရာကို ချစ်မိခဲ့ရာက စွန့်စားခန်းတွေအပြည့်နဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးဖြစ်ပေါ်လာတာက ဒီဇာတ်ကားလေးရဲ့ အဓိကဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုပါ ဒါ့အပြင် တစ်ယောက်ချင်းမှာ unique ဖြစ်တဲ့ character တွေနဲ့ ဖရန့်ခ်ရဲ့ မိတ်ဆွေဟောင်းတွေကလဲ ဘယ်လိုပါဝင်ထားကြတယ်ဆိုတာကလဲ စိတ်ဝင်စားစရာပါ ဒီထဲမှာ သူတို့ကိုသတ်ဖို့ အမိန့်ပေးခံထားရလို့အငြိမ်းစားယူထားပေမယ့် ထက်မြက်တောက်ပဆဲ သူတို့ရဲ့လက်ရည်တွေကို ထုတ်ပြရပါတော့တယ် ရင်ဖိုဖွယ်ရာ တိုက်ခန်းခိုက်ခန်းတွေနဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးအဆုံးမှာသူတို့ကိုသတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့သူကို တွေ့ရမာလား သူတို့ရော အသက်အန္တရာယ်လွတ်သွားရဲ့လား ဖရန့်ခ်ကရော အချေမလေး ဆာရာရဲ့ အချစ်ကိုရပါ့မလားဆိုတာကြည့်ရှုအားပေးကြပါလို့ Credit Review
War of the Worlds (2005) တစ်​ကားဆိုတစ်​ကား ​ငွေ​ကြေးအရ​အောင်​မြင်​ရုံအတွက်​သာမကပဲ အနုပညာလက်​ရာတန်​ဖိုးအ​နေနဲ့ပါ ​ပြောစမှတ်​တွင်​ကျန်​​အောင်​ ရိုက်​ကူး​လေ့ရှိတဲ့ ဒါရိုက်​တာကြီး စတီ​ဖင်​စပီးဘာ့ဂ်ျ​ရဲ့ ဆု​ပေါင်းများစွာရရှိထားတဲ့ဇာတ်​ကား​လေးပါ။ Ray ဆိုတဲ့ သာမန်​ crane operator ​လေးတစ်​​ယောက်​။ ဇနီးနဲ့ကွာရှင်းထားပြီး သမီးတစ်​​ယောက်​ သားတစ်​​ယောက်​နဲ့ ​နေရတဲ့လက်​လုပ်​လက်​စားသမား​လေးတစ်​​ယောက်​ရဲ့ ဘဝဟာ ကမ္ဘာကြီးကိုအုပ်​စိုးချုပ်​ကိုင်​မယ့်​ ဂြိုဟ်​သား​တွေရန်​က​နေလွတ်​​အောင်​ ​ပြေးရင်းနဲ့ပဲ သူ့ရဲ့ သတ္တိနဲ့ ကြံရည်​ဖန်​ရည်​​ကြောင့်​ပဲ သူရဲ​ကောင်းတစ်​ဦးအဖြစ်​ ​ရောက်​ရှိခဲ့ပုံပါ။ လမ်းမ​တွေထက်​မှာ ဂြိုဟ်​သား​တွေရဲ့ tripod ​တွေရန်​က သားသမီး​တွေရဲ့ အသက်​​ဘေးကိုကာကွယ်​ဖို့ ​ပြေးလွှားရပုံ​တွေ၊ လက်​နက်​ဆန်း​တွေနဲ့ ကြမ်းတမ်းလှတဲ့ တိုက်​ပွဲ​တွေကြားက မိဘ​မေတ္တာနဲ့ လူသား​တွေရဲ့ ရုန်းကန်​လှုပ်​ရှားမှု​တွေကို မြင်​​တွေ့ခံစားကြရမှာပါ။ မင်းသားက Tom Cruise ၊ မင်းသမီးက Dakota Fanning ဆို​တော့ သရုပ်​​ဆောင်​​ပိုင်းအရ​ရော ရိုက်​ချက်​​တွေအယူအဆ​တွေပိုင်းမှာ​ရော ​ပြောစရာမလို​အောင်​ ​ကောင်းမွန်တဲ့ဇာတ်​ကားဖြစ်​ပါတယ်​။ ၂၀၀၅ ခုနှစ်​မှာ ​အောင်​မြင်​မှု​တွေ တပုံကြီးနဲ့ မသိသူမရှိခဲ့တဲ့ ဇာတ်​ကား​လေးကို ပြန်​ကြည့်​ချင်​သူ​တွေအတွက်​​ရော ...
IMDB: 6.5/10 382,990 votes